Vaovao sy tsaho momba ny RAW malaza: Nahazo hafanana lehibe tany an-tsambo ny Superstar noho izy lasa tompon-daka tamin'ny WWE, Nomena anarana lehibe ny famotsorana an'i Wyatt, Lesnar vs Mahal? (11 Aogositra) - Wwe
Vaovao sy tsaho momba ny RAW malaza: Nahazo hafanana lehibe tany an-tsambo ny Superstar noho izy lasa tompon-daka tamin'ny WWE, Nomena anarana lehibe ny famotsorana an'i Wyatt, Lesnar vs Mahal? (11 Aogositra)
Tongasoa eto amin'ny fanontana hafa an'ny Vaovao RAW vaovao sy tsaho.
Taorian'ny herinandro maro an'ireo mpankafy nandiso fanantenana dia nanatsara fatratra ny RAW tamin'ity herinandro ity. Tsy ny fiverenan'ilay tompon-daka tamin'ny WWE teo aloha, Randy Orton, ihany no naka rivotra madio tao amin'ilay vokatra, fa ireo superstar hafa rehetra kosa dia niara-nivory mba hanomezana RAW tsy hay hadinoina ireo mpankafy.
Miaraka amin'ny firosoana mankany SummerSlam mandroso, WWE dia nanambara lalao lehibe sasany ho an'ny RAW. Anisan'izany ny Goldberg izay mihantsy an'i Bobby Lashley amin'ny WWE Championship ary Damien Priest mandray an'i Sheamus ho an'ny amboaran'i Etazonia.
Amin'ity fanontana anio ity dia hijery vaovao mahaliana sy tsaho miely mivoaka amin'ny marika mena isika ary inona no mety ho dikan'izany mandroso:
# 5 RAW Superstar Sheamus dia nanambara ny antony nahazoany hafanana be tany ambadiky ny sehatra
Vao avy niresaka tamin'i Ryan Satin ilay superstar RAW, Sheamus, tao amin'ny podcast-ny Out of Character. Nambarany fa tsy voatahiry ny olona any ambadiky ny sehatra rehefa nandresy tamin'ny Tompondakan'ny WWE voalohany izy tamin'ny 2009. Nanjary Tompondakan'i WWE i Sheamus, telo volana monja taorian'ny nanombohany ny laharana voalohany tamin'ny RAW tamin'ny fandresena an'i John Cena.
Sheamus dia nilaza fa tsy faly tamin'ny fandreseny ny olona tao ambadiky ny sehatra. Nilaza izy fa nahazo hafanana goavambe tany an-tsehatra, ary nanampy ihany koa fa ny fahazoana hafanana any ambadiky ny dingana dia midika hoe manao ny asanao tsara ianao.
'' Betsaka ny olona tsy nahita ny toe-javatra niseho. Betsaka ny bandy efa teo nandritra ny taona maro ary tsy nanana izany fotoana izany velively. Ny zava-misy rehefa nandresy aho [nihomehy], ny hafanana! Ny hafanana! Hafanana be loatra, vady, hafanana be loatra. Hafanana be dia be no noheveriko fa ho tratry ny masoandro ao amin'ny faritra afovoany, '' hoy i Sheamus.
Lahatsoratra iray nozarain'i Sheamus (@wwesheamus)
Na dia tsy nety tsara tamin'ny olona sasany aza ny fanerena avy hatrany an'i Sheamus, dia nanaporofo ny tenany ho fananana ho an'ny WWE nandritra ny taona maro ny Celtic Warrior. Imbetsaka izy no nanao ny Tompondakan'ny WWE ary Tompondakan'i Etazonia momba ny RAW izy amin'izao fotoana izao.
toy ny zaza no itondran'ny sipako ahy
maninona ny olona sasany no miteny mafy be
ahoana no ahalalako raha misy olona manadala ahy
misintona ny olona izy, raha ny lavo amin'ny fitiavana
tononkalo momba ny olon-tiana very